Hand Stacker - BaganMart
HELI, Electric Pallet Truck CBD 15 (လျှပ်စစ်ဓါတ်အားသွင်းသုံး သယ်ပက်လက်ယာဉ်)
Brand : Olift
Model : A401
လုပျငနျးအမညျ : Shwe Nayar Co.,Ltd Unverified Member
ဖုနျးနံပါတျ : 01-613765,09-5105112,09-5138522
Max. Lifting Height : 1600mm
Fork Length : 800mm
Fork Width : 750mm
Hand Stacker color : as per your requirement
stacker net weight : 100kg-200jg
hand stacker lifting heigth : 1.6-3.0m
hand stacker load capacity: : 1000-1500kg
hand stacker brand : OLIFT
Manual Hand Stacker is simple structure, flexible operation, low failure rate and high safety.Suited for working in narrow aisle.Our manual hand stacker features simple structure,flexible operation,low failure rate and high safety.It is ideally suited for stacking,loading,unloading and transporting operations in narrow aisles ans restricted spaces.
ရွှေနယား ကုမ္ပဏီကို ၁၉၉၂ ခုနှစ်တွင် တည်ထောင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပါသည်။ မိမိနိုင်ငံတွင် ပစ္စည်းကောင်းကောင်း သုံးစေချင်သောစေတနာဖြင့် လေမူတ်စက်နှင့် စက်ပစ္စည်းအမျိုးမျိူးကို လက်လီ၊လက္ကား ဖြန့်ချိရောင်းချ ပေးလျက်ရှိပါသည်။ Customer များ စက်ပစ္စည်းတွေကို အရည်သွေးကောင်းမွန်စွာ ဈေးနူန်းသင့်တင့်ချိုသာမူဖြင့် ၀ယ်ယူရရှိနိုင်ပါသည်။
For Hand Stacker
May I get the quotation for "Hand Stacker" ?